Atletisma – «10 km de Mamoudzou» : hahemotra amin’ny 21 mey ny fifaninanana | NewsMada
Atletisma – «10 km de Mamoudzou» : hahemotra amin’ny 21 mey ny fifaninanana
Tsy raikitra amin’ny fotoana voatondro ilay hazakazaka mirefy 10 km, tokony hotanterahina any Mamoudzou, Mayotte, fa hahemotra amin’ny fotoana manaraka. Anton’izany ny tsy mbola fahavononan’ny mpikarakara.
Araka ny nambaran’ny tomponandraikitra iray eo anivon’ny federasiona malagasin’ny atletisma (FMA), hahemotra amin’ny faha-21- n’ny volana mey ho avy izao ny «10 km de Mamoudzou», fa tsy raikitra amin’ny 19 marsa ho avy izao. Raha ny fantatra, tsy mbola vonona amin’ny fandraisana io hazakazaka io ry zareo mpikarakara. Tsiahivina fa hisolotena an’i Madagasikara amin’io fifaninanana io i Mampitsoatry avy amin’ny Cospn Boeny sy i Nanie avy amin’ny 3Fans.
Manana fotoana tsara hanomanana sy hiatrehana ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, amin’ny «cross country», hatao any Ogandà, ny 26 marsa ho avy izao, izany i Nanie. Na izany aza, tsy maintsy mbola hiady mafy izy amin’ny fifaninanam-pirenena, hatao any Ihorombe, ny 25 febroary ho avy izao. Raha ny herijika aloha, tokony ho voatazony ny maha tompondakan’i Madagasikara azy, raha jerena ny zava-bitany.
Ankoatra izay, hanokatra ny taom-pilalaovany etsy amin’ny kianjana’Alarobia, amin’ny alahady ho avy izao, ny eo anivon’ny seksiona Antananarivo Renivohitra. Anisan’ny hampiavaka io fihaonana io ny fanomezana loka 100.000 Ar ho an’ny klioba tsara fanamiana sy manana atleta betsaka indrindra. 60.000 Ar ny an’ny faharoa ary 40.000 Ar ny fahatelo. Mba ho fampirisihana ny klioba tsirairay ny anton’izany, sy hanome lanja ny atletisma eto Analamanga. Marihina fa efa nisy io loka io, nandritra ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ligin’Analamanga, tamin’ny «cross country», izay nandrombahan’ny klioba Cnaps Sport ny laharana voalohany.